Zijonga njani iiMveliso zeShopper ezichaphazela abathengisi beAdWords | Martech Zone
Ibajonga njani iMilinganiselo yeeMveliso zakwaShopper kubaThengisi beAdWords
Lwesine, Matshi 12, 2015 NgoMgqibelo, nge-4 kaFebruwari ngo-2017 UScott Donald
UGoogle usasaze inqaku leAdWords ngasekupheleni kukaJulayi ukunceda abathengi bathathe izigqibo ezizezokuthenga. Uluhlu lweeNtengiso zeMveliso (i-PLA) kwiGoogle.com kunye Google Shopping ngoku kuya kuba nemveliso okanye amanqaku okuthenga kuGoogle.
Cinga iAmazon kwaye yile nto kanye oza kuyibona xa ukhangela iimveliso kunye neenkonzo kuGoogle. Ukulinganiswa kwemveliso kuya kusebenzisa inkqubo yokulinganiswa kweenkwenkwezi ezi-5 kunye nokubalwa kokuphononongwa.
Masithi ukwintengiso yomenzi wekofu omtsha. Xa ukhangela imveliso kaGoogle, iziphumo ziya kukunika uluhlu lweemveliso ezikhoyo kunye nenqanaba kunye nokuphononongwa kwazo. Inqaku elitsha leeNtengiso zikaGoogle liyafumaneka kubathengi eMelika okwangoku.
Imilinganiselo yeMveliso ibanceda njani abathengi
Kubathengi, isibonelelo sicacile. Ngokuhlelwa ngokufanelekileyo ukwahlulwa kweemveliso kunye neenkonzo, izigqibo zokuthenga zinokwaziswa ngakumbi kwaye zinokugqitywa ngokukhawuleza. Abathengi akufuneki bangene kulo lonke uphononongo ukujonga ukuba imveliso ethile ihamba njani nabanye abathengi.
Ulwazi olubalulekileyo olunceda abathengi bathathe isigqibo kulula ukufumana. Akukho sidingo sokuba abathengi benze olunye uphando kuba uphononongo lwemveliso lukhona kanye kwiiNtengiso zoDweliso lweMveliso ngenxa yenqaku elitsha leAdWords.
Imilinganiselo yeMveliso ibachaphazela njani abaRhwebi
Ngaphezulu kwento entsha eyenziwayo yeAdWords kubathengi, ukulinganiswa kwemveliso kukholelwa ekubeni kuluncedo kubarhwebi ngeendlela ezininzi. Ngomgangatho wokuseta iimveliso kunye neenkonzo ngaphandle kokhangelo lukaGoogle, iiNtengiso zoLuhlu lweMveliso zinokunceda ukuvelisa ukugcwala kwabantu abafanelekileyo. Uvavanyo lokuqala kwi-beta lukwabonisa ukonyuka kwepesenti ye-10 kumanqanaba okucofa kwiiNtengiso zoLuhlu lweMveliso.
Ukucacisa ngakumbi, masibuyele kumzekelo wethu wokwenza ikofu. Xa ukhangela into kuGoogle.com okanye kuVenkile kuGoogle, abathengi bazokubona luluhlu lweziphumo ezixhasiweyo zokuthenga. Inye into enokuba nenqanaba leenkwenkwezi ezine kunye nohlolo lomsebenzisi olungama-230. Enye inenqaku leenkwenkwezi ezi-4.5 elinophononongo olungu-3,427 njalo njalo. UGoogle uyaqhubeka ukwahlulahlula izinto zibe okudume kakhulu kwaye nabantu baqwalasele.
Xa abathengi becofa ukulinganiswa, baphinde bathunyelwe kwiwindow entsha apho kukho iinkcukacha ezithe kratya malunga nenqanaba. Ingxelo enzulu inokubandakanya iinkcukacha ezinje ngeenkonzo zabathengi, ukuphatha amabango, izaphulelo, indleko, ukuthengwa kokulula, umgangatho wewebhusayithi kwaye, ulwaneliseko ngokubanzi. Okubandakanyiweyo kule festile likhonkco kwiphepha lasekhaya labarhwebi elonyusa amathuba okucofa.
Imilinganiselo yeMveliso yeAdWords, ngamafutshane, inikezela abathengisi enye indlela yokuma kukhuphiswano ngelixa isonyusa ipesenti ye-CTR kwaye ekugqibeleni inzuzo.
Apho uGoogle afumana khona idatha
Ukunceda abathengi bathathe izigqibo ngemilinganiselo yokuthenga kuGoogle ngelixa usonyusa ukubonakaliswa kwemveliso kunye ne-CTR konke kulungile. Kodwa zilunge kangakanani ukulinganiswa? Ivelaphi idatha yedatha?
Ngokutsho kweGoogle, Ukulinganiswa kwemveliso kukuhlanganiswa kokulinganiswa kunye nokuphononongwa kwedatha kwimithombo emininzi. Ukulinganiswa kunokuvela kubarhwebi, abasebenzisi, abahlanganisi benkampani yesithathu kunye neendawo zokuhlela ezidityanisiweyo kunye ukubonisa ukumelwa komndilili wenqanaba elixeliweyo.
Idatha, ngamanye amagama, ivela ikakhulu kwi- Uphando lwabasebenzisi bakaGoogle eyindlela yokukhangela yokufumana ingxelo yabathengi. Amanqaku okugqibela aboniswe kwiziphumo zophando asekwe ikakhulu ngaphezulu kwe-1,000 XNUMX yophando. Uhlaziyo lukwenziwa ngokuqhubekekayo njengoluvo ngokubanzi kwinkampani, kwimveliso okanye kutshintsho lweenkonzo.
Ngubani onokusebenzisa uphawu lweMilinganiselo yeMveliso
Ukulinganiswa kweeNtengiso zoLuhlu lweeMveliso kuluncedo kuphela kubarhwebi nakubathengisi abajolise kubathengi baseMelika. Ukwenza inqaku, abathengisi kufuneka bakhethe ukuba babelane ngedatha yokuphononongwa kwemveliso ngokuthe ngqo kuGoogle okanye ngomdibanisi wesithathu. Imithombo yesithathu evunyiweyo ibandakanya IBazaarvoice, Ekomi, Feefo, Uphengululo lwePower, Reevoo, Ukuhlaziywa kwemilinganiselo, Ivenkile evunyiweyo, Jikela kwi, Iingxelo eziqinisekisiweyo, Iimbono, Yotpo.
Abarhwebi kufuneka ubuncinci baphonononge kathathu ukuze bafaneleke. UGoogle unika abathengisi ixesha elaneleyo lokuthatha isigqibo sokuba babelane ngomxholo wokuphononongwa okanye ngenye indlela ukuqala ngasekupheleni kukaJulayi ukuya ku-Okthobha. Ngeli xesha, zonke iiNtengiso zoLuhlu lweMveliso ziya kuba nenqaku lokulinganiswa kwemveliso ebonisiweyo kwabo banedatha yokuphononongwa. Yiza ngoNovemba, ukulinganiswa kwemveliso kuya kuboniswa kuphela ukuba umrhwebi ukhethe ukubelana ngohlolo lweemveliso zabo.
Uyenza njani iMilinganiselo yeMveliso kaGoogle
Ukuba uGoogle uqokelele idatha yohlolo olwaneleyo kwiimveliso zakho, iireyithingi kufuneka zivele ngokuzenzekelayo kuluhlu lwakho. Ukuba ufuna ukuqiniseka, nangona kunjalo, ukuba iireyithingi ziya kuhlala zikhona emva kwexesha lobabalo, unokugcwalisa nefom yokulinganisela imveliso namhlanje.
Ukuba ishishini lakho lisebenzisa ii-PLAs, eli lithuba elinye lokuthatha ithuba. Ukulinganiswa okuhle okuqhotyoshelwe kuluhlu lwakho yenye yeendlela zokutsala kunye nokunceda abathengi ngezigqibo zabo zokuthenga. Ukulinganisa okungalunganga, kwelinye icala, kunokutsala ingqalelo engako kude kwiimveliso zakho. Ke gcinani engqondweni ukuba amanqaku atshintsha ngokuhamba kwexesha. Ukuhlala ngaphezulu, akukho ndlela ibhetele yokwenza ishishini ngaphandle kokubonelela ngenkonzo enkulu yabathengi kunye neemveliso ezilungileyo kuphela. Cwangcisa ireyithingi yeenkwenkwezi ezi-5 ngalo lonke ixesha kwaye nakwishishini lakho kuphela kwendlela oya kuyo.
tags: iadwordsAbathengisi beadwordsUluhlu lweemveliso zeadwordsindawo yemarikeEkomiFeefogoogle adwordsUluhlu lwemveliso kaGoogleUkulinganiswa kwemveliso kuGoogleUkuthenga kuGoogleUphengululo lwePowerUluhlu lwemvelisoUluhlu lweemveliso zentengisoUluhlu lwemvelisoUkulinganiswa kwemvelisoReevooUkuhlaziywa kwemilinganiseloIvenkile evunyiweyoJikela kwiIingxelo eziqinisekisiweyoIimbonoYotpo
Njenge-CEO kunye nomsunguli we Idala yedijithali, UScott usebenzisa umoya wakhe wokurhweba, ubuchule kunye nothando lwazo zonke izinto zedijithali ukwandisa ishishini lakhe ukuba libe ngumbutho wobuchule obungenamthungo.
Ixesha lokuRap malunga neShishini lakho (Ungaphoswa yeyam)
Uluqhuba kanjani uvavanyo lwe-A / B ngoTshintsho kwakhona